छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको ५ लाख ४० हजार कित्ता आइपीओ भर्ने अन्तिम दिन आज
ARCHIVE, MARKET WATCH » छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको ५ लाख ४० हजार कित्ता आइपीओ भर्ने अन्तिम दिन आज
काठमाडौं - छ्याङ्दी हाइड्रोपावरको ५ लाख ४० हजार कित्ता आइपीओ भर्ने आज (बिहीबार) अन्तिम दिन हो । बिहीबार बैंकिङ समयसम्ममात्र यो आइपीओ भर्न सकिनेछ । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड जमल, छ्याङ्दी हाइड्रोपावर गैरीधारा तथा ग्लोबल आइएमई बैंकको अधिकांश शाखा कार्यालयबाट आवेदन फारम बुझाउन सकिनेछ । त्यस्तै काठमाडौं क्यापिटल मार्केट काठमाडौं प्लाजा, प्रभु क्यापिटल कमलादी, जनरल फाइनान्सको काठमाडौं न्युरोड र चाबहिल शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन फारम भर्न र बुझाउन सकिनेछ ।
ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको यस कम्पनीले निष्कासन गरेको कुल सेयरमध्ये १० हजार ८०० कित्ता सेयर कर्मचारीलाई छुट्याएको छ भने २७ हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई दिएको छ । यो आइपीओमा न्यूनतम ५० देखि अधिकतम २७ सय कित्तासम्म आवेदन दिन पाइनेछ । साधारण सेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २७ करोड पुग्नेछ ।
शालीनदीमा देखिएका यी ४ दृश्य, जुन पचाउनै गाह्रो भो...
बीचैमा पढाई छुटेका बिद्यार्थीहरुका लागि खुसीको खबर ! त्रिविले ल्यायो यस्तो सुबिधा
बिज्ञापनका नाममा जनता झुक्याउन पाइन्छ ? सीइओ साप 'टु वान जा टु' सिक्नुस् !
टिप्स : सहकारीबाट ऋण लिंदै हुनुहुन्छ ? यी ५ कुरामा सचेत हुनुहोस् है !
केपी ओलीको मृत्यु भएको आशयको समाचार राख्ने मोरङ अनलाइन बन्द, सञ्चालकले मागे माफी !
यी हुन् भारतीय सेनाका कमाण्डर ! जसले भारतको बेइजत गरे, करोडौंले हेरेको भिडियो
यी हुन् ४० करोडको लोभ देखाएर कन्या खोज्ने ब्राम्हण, केटि फकाउन पत्रिकामै बिज्ञापन !
खुल्यो भित्री रहस्य : गोपाल पराजुलीले यस्तो बाध्यता परेर गरे ४ वटी विवाह (विवाहका कारणसहित)
अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशित समाचार शुभम् मिडियाको लिखित अनुमतिविना कतैपनि सम्प्रेषण गर्न मनाही छ । हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्छौं । र आजका हरेक पाठकहरु खोजमूलक समाचारका प्यासी छन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । त्यसैले देशका विभिन्न ठाउँहरुमा हाम्रा इन्भेष्टिगेसन ब्यूरोहरु छन् । तपाईंसँग पनि केहि समाचार छन् भने वा हामीले प्रकाशित गरेका समाचार सम्बन्धि केहि टिका-टिप्पणी भए सिधै ९८५१०१७९१४ वा ०१-५१९९१०८ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । वा arthasarokarnews@gmail.com मा ई-मेल गर्न सक्नुहुनेछ । अर्थ सरोकारको श:शुल्क ग्राहक बन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।